हाम्रो प्रोजेक्टमा रिटेलर बन्नुहोस्: प .्क्तिबद्ध र वितरण गर्नुहोस्। | क्रिएटिव अनलाइन
जुडित मर्सिया | | ट्यूटोरियलहरू, धेरै
के तपाइँसँग पोष्टर, फ्लायर, रोल अप डिजाइन गर्नु पर्छ? केही सिक्नुहोस् युक्तिहरू अधिक सटीक प्राप्त गर्न तत्वहरू बीच र द्रुत प al्क्तिबद्ध गर्नुहोस्। यो महत्त्वपूर्ण छ कि सबै केन्द्रित छ र एक अर्कासँग बाकस छ।
जब हामी इलस्ट्रेटरमा प्रोजेक्ट डिजाइन गर्छौं हामी प्रयोग गर्न सक्दछौं उपकरणहरू यसले हामीलाई पign्क्तिबद्ध गर्न मद्दत गर्दछ बिभिन्न तत्वहरू त्यो हाम्रो टुक्रा बनाउँछ। थप रूपमा, यसले हामीलाई अनुमति दिनेछ समय बचत गर्नुहोस्। अर्को, हामी तपाईंलाई एक देखाउछौं छोटो ट्यूटोरियल ताकि तपाईं तिनीहरूलाई प्रयोग गर्न सिक्नुहोस्।
1 पंक्तिबद्ध उपकरण
2 वस्तुहरू चयन गर्नुहोस्
3 पंक्तिबद्ध र वितरण
4 संग पign्क्तिबद्ध गर्नुहोस् ...
5 स्पेसिing पign्क्तिबद्ध गर्नुहोस्
सबै भन्दा पहिले, हामी तपाईंलाई देखाउने छौं जहाँ यो उपकरण खोज्ने। तपाईं आफैले शीर्ष मेनूमा ट्याबमा अवस्थित गर्नुपर्नेछ "विन्डो" र विकल्प खोज्नुहोस् "लाईन अप"। कार्यस्थानमा यस उपकरणको सर्टकट राख्न सल्लाह दिइन्छ, किनकी तपाईंले यसलाई प्रयोग गर्न सिक्ने बित्तिकै यो आवश्यक हुनेछ।
Te एउटा विन्डो देखा पर्नेछ जसमा तपाईं प्रत्येक बटनको आइकनहरू द्वारा निर्देशन लिन सकिन्छ तिनीहरू सबैको विशेषताहरू बुझ्नको लागि: बाँया प center्क्तिबद्ध, अन्य बीचमा.
वस्तुहरू चयन गर्नुहोस्
जब हामीसँग छ वस्तुहरू काम तालिका मा हामी पर्छ तिनीहरूलाई चयन गर्नुहोस्। केवल हामी एक अर्कासँग पign्क्तिबद्ध गर्न चाहन्छौं। एक भन्दा बढी तत्वहरू चयन गर्न, हामी "शिफ्ट" कुञ्जी होल्ड गर्नेछौं र हामी सबै तत्वहरूमा क्लिक गर्नेछौं जुन हामी चयन गर्न चाहान्छौं। अवधारणालाई सजिलै बुझ्नको लागि, हामी तल छवि संलग्न गर्छौं जुन माथिको वर्णन गरिएको थियो भनेर देखाउँदछ।
पंक्तिबद्ध र वितरण
उपकरण विन्डोमा यसले हामीलाई अनुमति दिन्छ: पign्क्तिबद्ध र वितरण। दुई बीचको भिन्नता सरल छ।
लाइन अप गर्न: वस्तुहरू कुनै वस्तुको बाउन्डिंग बक्सको चार पक्षहरू, वा यसको केन्द्र दुबै ठाडो र तेर्सो प al्क्तिबद्ध गर्न सकिन्छ।
Dवितरण: यो एट्रिब्युट प्रयोग गरेर हामी चयन गरिएका वस्तुहरू चयन गरिएको खाली स्थान वा आर्टबोर्ड भित्र समान दूरीमा बनाउँछौं। त्यो हो, यदि हामी विकल्प छनौट गर्छौं "बायाँ वितरित गर्नुहोस्", कुनै वस्तुको बायाँ पक्ष र अर्को चयनित वस्तु बीच तिनीहरू बीच समान दूरी हुनेछ।
संग पign्क्तिबद्ध गर्नुहोस् ...
यो हाम्रो उद्देश्य अनुसार सही विकल्प छनौट गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। हामी "को ट्याबमा सन्दर्भ गर्दछौंसंग पign्क्तिबद्ध गर्नुहोस्"जसले हामीलाई बीचमा छनौट दिनेछ:
चयनको साथ प .्क्तिबद्ध गर्नुहोस्
कुञ्जी वस्तुमा पign्क्तिबद्ध गर्नुहोस्
आर्टबोर्डको साथ प Al्क्तिबद्ध गर्नुहोस्
एक वा अर्को चल चयन गरिएकोले हामीलाई बिभिन्न भिन्न नतिजा दिनेछ, त्यसकारण, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईले यो सेक्शन चिह्नित गर्नुभएको छ.
स्पेसिing पign्क्तिबद्ध गर्नुहोस्
«Align» उपकरणको साथ पनि हामी वस्तुहरूको समूह र तिनीहरूको बीचको खाली ठाउँहरूमा दूरीहरू वितरण गर्न सक्छौं। उदाहरणको लागि, हामी तल छविमा देख्न सक्छौं, हामीसँग कार्य तालिकामा वितरण गर्न तीनवटा आइकनहरू छन्। यदि हामी उनीहरू बीचको खाली स्थान एक समान छ भन्ने सुनिश्चित गर्न चाहन्छौं र एक शालीन डिजाइन प्राप्त गर्छौं भने हामीले निम्न चरणहरूको पालना गर्नुपर्दछ:
सबै इच्छित वस्तुहरू चयन गर्नुहोस्।
विकल्प छनौट गरिएको छ: चयन संग पign्क्तिबद्ध गर्नुहोस्।
विकल्पमा क्लिक गर्नुहोस्: तेर्सो दूरी तेर्सो रूपमा वितरण गर्नुहोस्।
यी चरणहरू पछ्याई हामीसँग वस्तुहरू पूर्ण रूपले तिनीहरू बीचको दूरीको हुनेछ, जुनसँग उही दूरी। यदि हामी अझ बढी सतर्क हुन चाहन्छौं भने हामी गर्न सक्दछौं वितरण वस्तुहरू।
हामी तपाईंलाई विभिन्न विकल्पहरूको साथ प्रयास गर्न र खेल्न प्रोत्साहित गर्दछौं। यदि तपाइँ अभ्यास गर्नुहुन्छ भने यस उपकरण प्रयोग गर्न पर्याप्त गतिशीलता पाउनुहुनेछ र तपाइँको काममा समय बचत गर्नुहोस्। साथै, तपाइँ निश्चित गर्नुहुनेछ सफा डिजाइन नतीजा प्राप्त गर्नुहोस् र विस्तार गर्न ध्यान।
एलियन र वितरण!
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » धेरै » हाम्रो डिजाइनको साथ एक फुटकर बिक्रेता: पign्क्तिबद्ध र वितरण